बाहिरियो यो वर्षको मनसुन, सरदरभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा — Sanchar Kendra
१प्रचण्डको अर्को प्रस्तावले गठबन्धनमा गयो भूकम्प, के भने त्यस्तो ?
२सीता दाहाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि, आईसीयूमा उपचार हुँदै
३एमालेले भन्यो- स्थानीय चुनाव पर धकेल्न पाइँदैन
४दशौँ सन्तानका रुपमा छोरी जन्मिएसँगै ३३ वर्षीया छत्यालले प्राण त्यागिन
५एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि
६बाटो भुलेकी महिलालाई होटल पुर्याएर सामूहिक बला’त्कार
७न्यूनतमसँगै अधिकतम तापक्रम घट्दा चिसो ह्वात्तै बढ्यो
८आज देशभरका अदालत बन्द, यस्तो छ कारण
९कानपुरमा भइरहेको चोरी अमेरिकामा लाइभ देखियो, भारतभर हंगामा
१०एन्टीबायोटिक औषधीले काम गर्न छोड्यो, संसारभरी लाखौँको मृत्यु-रिपोर्ट
११नेपालमा आज १० हजार २५४ जनामा सङ्क्रमण पुष्टि
१२घरमै आइसोलेसन बस्दा स्वास फेर्न गाह्रो भए के गर्ने ? थाहा पाउनुहोस ९ उपाय
बाहिरियो यो वर्षको मनसुन, सरदरभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा
काठमाडौँ । यो वर्षको मनसुन बाहिरिएको छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै सोमबार बेलुकाबाट यो वर्षको मनसुन पूर्णरुपमा नेपालबाट बाहिरिएको जनाएको छ ।
यो वर्ष औषतभन्दा ९ दिन ढिला गरी मनसुन बाहिरिएको हो । औसतमा अक्टोबर २ मा नेपालबाट मनसुन बाहिरिन्छ । गएको शुक्रबार नेपालका केही क्षेत्रबाट बाहिरिन शुरू गरेको मनसुन सोमबार पूर्णरुपमा बाहिरिएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकाले जनाएको छ ।
महाशाखाका अनुसार शुक्रबार नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिमी भूभागबाट बहिर्गमन भएको थियो ।
यस वर्षको मनसुनमा सरदरभन्दा १५ प्रतिशत बढी वर्षा भएको छ । यो वर्ष मनसुनका चार महिना (जेठदेखि असोज) मा सबभन्दा बढी पोखरामा वर्षा भएको छ ।
पोखरा विमानस्थल क्षेत्रमा चार महिनामा सरदर ३०६४ मिमि वर्षा हुन्छ, यो पटक ४२७० मिमि वर्षा भएको वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेलले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यस वर्ष मनसुनमा सबभन्दा कम वर्षा कर्णालीको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा भएको छ ।
मुस्ताङमा सरदर १५८.५ मिमि वर्षा हुने भए पनि यो वर्ष ४ सय ३० मिमि वर्षा रेकर्ड भएको छ । मनसुन बाहिरिए पनि आज पहाडी भेगमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
मौसमलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रणाली विकसित नभएपनि हाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ।
आज दिउँसो देशभर सामान्यतया सफादेखि आंशिक बदली रही पहाडी भू-भागको एक-दुई स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङ्गसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।